Izinsizakalo Zokuqamba Iyathengiswa in Anchorage, Alaska
Real Estate Listings: Business Directory Design Services Alaska Anchorage
Design Services in Anchorage, Alaska
I-Alaska ((lalela); i-Aleut: Alax̂sletê; Inupiaq: Alaasikaq; Alutiiq: Alas'kaaq; Tlingit: Anáaski; Russian: Алялска, romanised: Alyáska) yisimo esisekupheleni kwentshonalanga ne-United States West Coast. I-Bering Strait evela e-Asia. I-ukumbulo ye-US, inqamula isifundazwe saseCanada iBritish Columbia kanye ne-Yukon empumalanga naseningizimu-mpumalanga futhi inomngcele wasolwandle neChukotka Autonomous Okrug yaseRussia ngasentshonalanga. Ngasenyakatho kukhona izilwandle zaseChukchi nezaseBeaufort zoLwandlekazi i-Arctic, kuyilapho uLwandlekazi iPacific luseningizimu nasentshonalanga eseningizimu. I-Alaska yisifundazwe esikhulu kunazo zonke saseMelika ngendawo nesigaba sesikhombisa esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Yindawo yesithathu enabantu abaningi futhi enabantu abaningi kakhulu, kepha indawo enkulu enabantu abaningi kakhulu kuleli zwekazi etholakala enyakatho yendawo yama-60, enabantu ababalelwa ku-738,432 njengo-2015 — okungaphezu kokuphindaphindeka kathathu kwabantu abahlangene baseNyakatho Canada naseGreenland. Cishe isigamu sabahlali base-Alaska bahlala ngaphakathi kwedolobha le-Anchorage. Inhlokodolobha yezwe kaJuniau yidolobha lesibili ngobukhulu e-United States ngokwendawo, okubandakanya insimu enkulu kunezifundazwe zaseRhode Island naseDelaware. I-Alaska yayihlalwa ngabantu bendabuko abahlukahlukene izinkulungwane zeminyaka ngaphambi kokufika kwabaseYurophu. Umbuso uthathwa njengendawo yokungena ekuhlalisweni kweNyakatho Melika ngendlela yebhuloho lomhlaba iBering. AmaRussia ayengabantu bokuqala okungewona owomdabu ukuhlalisa le ndawo kusukela ngekhulu le-18, ekugcineni basungula ikoloni lase-Alaska elalihlala iningi lesifundazwe samanje. Izindleko nobunzima bokugcina le mpahla ekude kwaholela ekuthengisweni kwayo e-US ngonyaka we-1867 ngama- $ 7.2 wezigidi, noma cishe amasenti amabili ngehektha ngalinye ($ 4.74 / km2). Le ndawo yahamba ngezinguquko eziningi zokuphatha ngaphambi kokuba ihlelwe njengenkundla ngoMeyi 11, 1912. Yamukelwa njengesifundazwe sama-49 saseMelika ngoJanuwari 3, 1959.Noma inesinye sezomnotho wombuso esincane kunazo zonke ezweni, i-Alaska ngelinye Imali engenayo ye-capita iphakathi kokuphakeme kakhulu, ngenxa yomnotho ohlukahlukene obuswa ngabokudoba, igesi yemvelo kanye ne-oyili, konke okunakho kakhulu. Izisekelo zamasosha ase-United States nezokuvakasha nazo ziyingxenye yomnotho; ngaphezu kwesigamu sombuso umhlaba ophethwe ngumphakathi ophathelene nezimali, kufaka phakathi inqwaba yamahlathi ezwe, amapaki, kanye nokwanda kwezilwane zasendle. Izakhamuzi zomdabu zase-Alaska ngokwezinga elithile ziphakeme kakhulu kunoma yisiphi isimo saseMelika, ngamaphesenti angaphezu kwe-15. Cishe kukhulunywa ngezilimi zabomdabu eziyishumi nambili, futhi abomdabu base-Alaskan banethonya elikhulu kwezepolitiki yendawo neyombuso.